Wiilka ugu da'da yar ee qoyska Trump oo laga helay safmareenka Covid-19
Wiilka ugu da'da yar ee qoyska Trump oo laga helay safmarka Covid-19
By WARIYAHA WASHINGTON , GAROWE ONLINE
Barron Trump ayaa waxaa u bilaabaneysa maalmaha karantiil wallow aysan astaamo ka muuqan.
WASHINGTON, US – Barron Trump, wiilka ugu da'da madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump, ayaa laga helay safmarka Covid-19 kadib markii waalidkiisu soo ritay fayruska, sida ay sheegtay marwada koowaad Melania.
Sidda ay warisay saxaafadda, Barron ayaa kal hore laga waayey xanuuka, balse waxaa la xaqiijiyey in uu la nool yahay kadib baaritaan kale.
"Cabsideyda waxay rumowday kadib markii mar labaad la tijaabiyay wallow kal hore laga waayey. Nasiib wanaag, waa wiil dhalinyaro ah oo xoog badan mana muujin wax calaamado ah," ayay qoraal ku tiri maalintii Arbacada.
Bayaanka ayaa la raaciyey: "Si uun waxaan ugu faraxsanahay in seddexdeena aan isku mar soo wada marnay sidaa darteed aan is daryeelno oo aan waqti wada qaadanno. Tan iyo waqtigaas, isaga wuxuu ahaa mid aanan qabin."
Melania iyo Donald Trump ayaa laba todobaad kale laga helay safmarka Covid-19, wallow madaxweynaha sheeganayo in uu kasoo kabtay xanuunka.
Xaqiiqada kaliya ee la og-yahay waa in Melania aysan isbitaal gelin sidda madaxweynaha taasoo lagu sababeeyay in ay kala darnaayeen.
Donald Trump oo wax laga waydiiyey xaalada caafimaad ee wiilkiisa ayaa sheegay in uu wanaagsan yahay, isagoo u rajeeyay soo kabasho deg-deg ah.
Sikastaba ah ahaatee, waxaa muuqaneysa in Coronavirus uu cagta marinayo Aqalka Cad, waxaana ay sarre u sii qaadeysa kiisaska cusub ee laga soo wariyey in ay jiri karaan mas'uuliyiin kale oo uu soo ridan karo caabuqa faafa.
Trump oo is-babardhigay Covid-19 iyo weerar dhimasho badan dhaliyey
Caalamka 07.05.2020. 14:34
Illaa hadda, 70,000 oo qof oo Mareykan ah ayaa u geeriyooday safmarka Coronavirus.
Aqalka Cad iyo Trump oo warar is-burinaya kasoo saarey badqabkiisa
Caalamka 04.10.2020. 08:15
Coronavirus oo haleelay Trump iyo marwada koowaad ee Mareykanka
Caalamka 02.10.2020. 09:40
Donald Trump oo dabciyey mowqifkiisa halista safmarka Covid-19
Caalamka 12.07.2020. 09:00
Mataano dhowaan dhashay oo loogu magacdaray Corona iyo Covid
Caalamka 04.04.2020. 18:45
"Ilhaan waxay muwaadin Mareykan ah noqotay kahor xaaska Trump"
Caalamka 16.07.2019. 09:15
Ilhaan Cumar oo ka jawaabtay weerar uu kusoo qaadey Donald Trump
Caalamka 22.09.2020. 06:25
Madaxweynaha Brazil oo shaaciyey in laga helay safmarka Covid-19
Caalamka 07.07.2020. 19:30
Khatar galbeedka Badda Cas kaga soo fool leh Soomaaliya oo laga digay 25.10.2020. 11:03
Halis soo wajahdey cilaaqaadka wadamada Itoobiya iyo Mareykanka 25.10.2020. 10:48
Deni oo furay kal-fadhiga 47aad ee Baarlamanka Puntland [DAAWO] 25.10.2020. 10:36
Galmudug oo dardargelineysa dhismaha goleyaasha degaanka 25.10.2020. 09:57
Madaxweyne raaligeliyey bixiyey kadib markii laga helay Coronavirus 25.10.2020. 09:44
Ilhaan Cumar oo soo saartey baaq ku aadan doorashooyinka Soomaaliya 25.10.2020. 07:40